★မြန်မာ့အလင်း★: စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
ရုရှက နောက်ထပ် တိုက်လေယာဉ်အမျိုးအစားအသစ်ကို တီထွင်လိုက်ပြန်ပြီတဲ့။ သူများနိုင်ငံတွေကတော့ တစ်ခုပြီးတစ်ခုတည်ထွင် ကြံဆနေတယ်။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတယ်။ ငါတို့မြန်မာတွေ ဘာတွေတီထွင် ကြံဆနေလဲ? ကြံဆတာ ဘာမှကိုမရှိပါဘူး။ အစိုးရက တီထွင်ကြံဆသူတွေ ပေါ်ထွက်လာအောင် ကူညီဖို့ နေနေသာသာ အင်တာနက်တောင် မသုံးနိုင်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ အတိုက်အခံတွေကလည်း နအဖလက်ထက်မှာ တိုးတက်ကြီးပွားလာမှာကို အထူးစိုးရိမ်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ရိုက်ချိုးနေတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ စိတ်ထားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် . . . မြန်မာလူမျိုး ဒီမိုသမားတွေကို ထိုင်းနဲ့ တခြားအစိုးရတွေက ဒုက္ခပေးရင် ၀မ်းသာနေတာ နအဖလူတွေပါ။ တလောက တိုက်လေယာဉ်ပျံပျက်ကျတော့ ငါတို့ မြန်မာ့လေသူရဲ့ကောင်း တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းသူရှိမယ်မထင်ပါနဲ့။ ဒီမိုဘက်က ၀မ်းသာလွန်းလို့ ဆောင်းပါးရှည်ကြီးရေးပြီး ပျော်ရွှင်မှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်း ဒုက္ခရောက်ရင် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ …. မျိုးချစ်စိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေပဲ ရှိနေမှတော့.. နိုင်ငံကြီး စုတ်ပြတ်နေတာ ဘာထူးဆန်းလဲ။
ခင်ဗျားတို့ရော ကမ္ဘာ့ဆင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်နေရတာ စိတ်မပျက်ဘူးလား? မြန်မာပတ်စပို့ကိုင်ထားရင် နိုင်ငံခြားမှာ ဟိုလူက ငုံ့ကြည့်.. ဒီလူက ငုံ့ကြည့်ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကို စိတ်မကုန်သေးဘူးလား? စိတ်ကုန်နေပြီဆိုရင် နိုင်ငံရေးကို လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီမိုနဲ့ နအဖတွေ အမုန်းအဃာတလျှော့ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းနားချပေးကြပါ။ အဲလိုမှ မလုပ်ရင် စောက်တင်းပြော… ရန်ဖြစ်နေတာနဲ့ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်က နလန်ထူတဲ့အဆင့်ကို ရောက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 9:28 AM